4 layer jamba ary nilevina tamin'ny PCB China Manufacturer
Description:PCB Jamba,Nalevina Bole PCB,Min Trace HDI PCB
Home > Products > HDI PCB > 4 layer jamba ary nilevina tamin&#39;ny PCB
HDI PCB dia mampiasa fitaovana laminate mandroso izay manjavozavo noho ireo ampiasaina amin'ny takelaka circuit vita pirinty. Koa satria ny HDI PCB dia mitaky ny mahitsy kokoa sy ny famokarana marina ary ny fampisehoana amin'ny ankapobeny, ireo fitaovana manokana izay mahafeno fepetra manokana. Storm Circuit dia manolotra safidy marobe maromaro ho an'ny HDI maro avy amin'ny mpamatsy orinasa ambony.
Ny votoatin'ny serivisy momba ny famolavolana tetik'asa dia ahitana ny famolavolana famolavolana sy ny fivarotana vokatra an-tanana maro be toa ny tanàna marani-tsaina, tranokalan'ny finday, logiciel dizitaly, milina POS, fahazoan-dàlana, terminal fanabeazana, telefaona finday, fandefasana fahaizana, fitaovana fanatanjahantena hendry, trano maranitra. fitaterana hendry, fitaovana fitsaboana sy ny sisa.
8.Fin'asa: Volon'ny fametahana
Haben'ny birao: 510 * 1200mm
Sakany / habaka kely ambany indrindra: 3 / 3mil
Famaranana vita: HASL leadfree, fandatsahana ENIG, chem tim, jiro volamena, OSP, rantsana volamena, peelable, volafotsy milentika, ENEPIG
Antony farany 10 maninona no tokony hividianana PCB sy PCBA amin'ny rivodoza
1.TOP kalitao - Tsy maintsy izany no kasaina manan-danja voalohany.Ny nametraka ny kalitao ho toy ny indostrian'ny orinasa voalohany.In PCB, manana fitaovana mihoatra ny 99% ao an-trano isika. Famonosana, fametahana, fisisihana, AOI (Auto-optical inspection), fitsapana, sns .Izany no mahatonga antsika hiantoka ny kalitao.
Na inona na inona ilainao FR4 mahazatra, TG ambony, birao aluminium, board RF miaraka amin'ny Er kely, varahina be dia be.lapge, birao teknolojia miaraka amin'ny jamba / haingam-pandeha vovoka.impedence dia afaka manolotra vokatra toy izany haingana haingana satria manana karazany maro izahay entana an-tsompitra.
fandinihana fileovana maimaim-poana. Mpanjifa marobe (indrindra ho an'ny mpamorona sasany) no tsy tsara amin'ny fizotran'ny asa famokarana, na dia tsy afaka mamorona rakitra gerber marina aza izy ireo ao amin'ny haino aman-jery EDA.Misy traikefa be ao amin'ny indostrian'ny PCB, ireto misy torohevitra vitsivitsy ho anao.7 * 24 fanohanana an-tserasera ankoatra ny Shinoa Taona vaovao.
7.Maly valiny, fandefasana haingana.
Tsy mamokatra PCB fotsiny izahay, fa koa PCBA sy amboara tariby .Amin'ny PCB tsy mibebaka dia tsy izay tianao, mety mila stencil mikapoka ianao, singa hampidinana sy tariby hampifandraisana. Ankehitriny, afaka manary ny rehetra aminay ianao ary miandry ny vokatra farany ho eo amin'ny latabatrao.
10.Mampandeha ny tahiry amin'ny trano .
Manana singa maro entana ao an-trano isika, izany no hamonjy fotoana sy ny vidiny amin'ny totalinao ny tetik'asa.Efa-manokana ho an'ny mpanohitra, capacitor, relays, ICs.
PCB Jamba Nalevina Bole PCB Min Trace HDI PCB PCB assembly Jamba PCB Jamba Jamba RF PCB Laminate PCB material PCBA jobs